Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo ku geeriyooday maxkamad dhexdeed - Puntland Mirror Believable Media Website
[ May 31, 2020 ] Ugu yaraan lix qof oo ku dhimatay miino la qaraxday gaari meel u dhow Muqdisho	Somalia
[ May 31, 2020 ] Somalia Says Elections Set for Early 2021 Despite Virus Risk	English News
[ May 30, 2020 ] Isimada Puntland oo dhex-dhexaadinaya Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa	Puntland
[ May 29, 2020 ] Golaha wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo 35% la kordhiyay	Somalia
[ May 27, 2020 ] Puntland iyo Galmudug oo ka wadahadlay iskaashiga amniga gobolka Mudug	Puntland
HomeWorldMadaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo ku geeriyooday maxkamad dhexdeed
Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi oo ku geeriyooday maxkamad dhexdeed
June 17, 2019 Puntland Mirror World 0
Maxamed Mursi ayaa xabsiga ku jiray tan iyo 2013. [Isha Sawirka: AP]
Qaahiro-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa ku geeriyooday maxkamad dhexdeed, sida maanta oo Isniin ah uu ku waramay taleefishinka dowladda.
Waxaa la sheegay in uu dhacay kahor kulanka maxkamada uuna geeriyooday markaas kadib.
Mursi ayaa jiray 67 sanno, waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo Masaari ah oo si dimuqraadi ah loo doorto sanadkii 2012 kadib Gugiii Carabta 2011 kaasoo lagu soo afjaray xukunkii 30-sanno ee madaxweyne Xusni Mubaarak.
Waxa uu madaxweyne ahaa keliya hal sanno afartii sanno ee la doortay kadib markii ciidamada milatariga ay xukunka ka tuureen sanadkii 2013, lana mamnuucay ururkii Mursi ee Ikhwaanul Muslimiin, waxaana tan iyo xilligaas uu ku jiray xabsiga.
Dhwor jeer oo hore ayaa xukumo kala duwan oo ay ku jirto xabsi daa’in maxkamad ku riday Maxamed Mursi.
July 10, 2016 Dagaal dib uga bilowday caasimada Koonfurta Suudaan ee Juba
April 11, 2019 Ciidamada milatariga Suudaan oo sheegay in ay xukunkii ka rideen madaxweyne Cumar Al-Bashiir
September 2, 2016 Shirkada Samsung oo hakisay iibka Galaxy Note 7 kadib dhibaato dhanka batariga ah
Isimada Puntland oo dhex-dhexaadinaya Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubno katirsan isimada Puntland ayaa bilaabay dadaalo ay ku soo afjarayaan khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa, sida ilo-wareedyo ka ag dhow odayaasha ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Isimada [...]
Golaha wasiirrada Soomaaliya oo ansixiyay ku noqoshada miisaaniyadda 2020 oo 35% la kordhiyay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha wasiiradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Khamiistii ansixiyay ku noqoshada miisaaniyada 2020, taasoo la kordhiyay $35 boqolkiiba. Guud ahaan kharashka miisaaniyadda la ansiiyay ayaa dhan $646.9 milyan oo ka kooban kharashaad mashaariic iyo [...]
Puntland iyo Galmudug oo ka wadahadlay iskaashiga amniga gobolka Mudug
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wasiiro katirsan Puntland iyo Galmudug ayaa maanta oo Arbaco ah kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Kulanka ayaa looga wadahadlay sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Boqolaal qof ayaa ka qeybgalay mudaharaad ka dhacay magaalada Laascaano ee gobolka Sool, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland ee PL TV. Mudaharadayaasha ayaa sheegay in aysan taageersanayn maamulka Somaliland, aysana dooneyn in [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda hoose ee degmada Garoowe ayaa bilowday buuxinta waddooyinka ay biyaha roobka fariistaan ee kuyaala gudaha magaalada, sida uu sheegay masuul katirsan dowladda hoose. Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Axmed, xoghayaha dowladda hoose oo warbaahinta maanta [...]
Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa lagu dilay qarax galabta oo Arbaco ah ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan booliiska iyo caafimaadka. Qaraxa ayaa dhacay kadib markii gaari laga soo buuxshay [...]